Apple waxay soo saartay bog cusub "Why Mac" si kor loogu qaado kumbuyuutaradiisa | Waxaan ka socdaa mac
Apple waxay soo saartay bog cusub "Why Mac" si kor loogu qaado kumbuyuutaradiisa
Apple waxay soo saartay degel cusub oo la yiraahdo Maxaa Mac. Halkaas ayay shirkaddu ku xayeysiisaa oo uga dhawaaqdaa saqafyada sare in Mac-ga uu yahay kan ugu fiican waayo-aragnimada xisaabinta shaqsiyeed ee aad ka heli karto. Illaa iyo hadda, xayeysiintu waxay diiradda saaraysay fiidiyowyada YouTube iyo xayeysiisyada kanaallada TV-ga, laakiin hadda waxay dooneysaa inay xoogaa ka carooto oo adduunka ugu sheegto internetka sababta aad u iibsaneyso Mac oo aanad u iibsanayn kombuyuutar kale.
Si fudud wax loo barto Cajiib xoog leh. Oo loogu talagalay in laguu oggolaado inaad shaqeyso, ciyaarto, oo aad ku abuurto qaabab aadan weligaa maleysan. Waa kombiyuutarka oo ay la socdaan codsiyo diyaar u ah inay isla sanduuqa ka baxaan. Cusbooneysiinta, softiweerka bilaashka ah ee softiweerku waxay ku hayaan waxyaabaha si joogto ah u socda una socdaan si habsami leh Oo haddaad horey u haysatid iPhone, waxay dareemeysaa aqoon laga bilaabo isla marka aad daarto.
Tani waa sida cusub (oo aan ahayn Mac-yada cusub) looga hadlo Webka. Waxay ka hadlaan faa iidooyinka ay leedahay in la helo Mac laakiin waxaas oo dhan ka sareysa in la helo Mac oo ay weheliyaan aaladaha kale ee Apple. Waa hubaal in iskudhexyaaca ka dhex jira aaladaha kala duwan ay adagtahay in lala simo shirkadaha kale.
Iyadoo Mac, ma jiro nidaam dejin adag. Gal koontadaada iCloud iyo macluumaadkaaga iPhone ama iPad si toos ah ayey u muuqataa. U adeegso Kaaliyaha Socdaalka wareejinta dejinta, koontooyinka isticmaalaha, iyo in ka badan oo dhaqso ah. Iyo haddii aad su'aalo qabtid ama u baahan tahay caawimaad, taageerada teknolojiyadda Apple marwalba waa uun sheekeysi khadka tooska ah ah, taleefan wicitaan, ama ballan dukaan ku yaal.
M1 chip iyo macOS Big Sur waxay keenaan amniga ugu horumarsan kombiyuutar kasta oo shaqsiyeed Mac. Mac wuxuu la yimaadaa malware ku dhisan iyo difaac virus, adiga ayuu ku siinayaa xorriyadda doorashada waxaad wadaagto iyo sida aad u wadaagto. FileVault xitaa waxay qarinaysaa nidaamkaaga oo dhan si loogu daro amniga. Marka dhib malahan waxaad sameyneyso, Mac wuxuu kaa caawinayaa macluumaadkaaga qaaska ah inuu sidaa ku ekaado.
Dabcan, Apple wuu ogyahay sida loo garaaco furaha. Hubi Webka wakhti kasta iyada oo loo marayo xiriiriyahan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple waxay soo saartay bog cusub "Why Mac" si kor loogu qaado kumbuyuutaradiisa
Spotify waxay ku dhawaaqeysaa inaad ku badbaadin karto waxyaabaha ku jira Apple Watch si aad u dhageysato "offline"